စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ Epson L15150 A3+ ပရင်တာ – unique.com.mm
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ Epson L15150 A3+ ပရင်တာ
နို 14, 2020
Print ထုတ်မလား၊ Scan ဖတ်မလား၊ မိတ္ထူဖတ်မလား 😱
(၃)မျိုးလုံးကို A3+ Size အထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Epson ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Epson L15150 ပရင်တာကို ယူနစ်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ … 😊
💥Epson L15150 A3+ (Print, Scan, Copy, Fax with ADF) ---> 859$
📌ကာလာ (၄)ရောင်ပရင်တာ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မှှင် Black Color (၁)ဘူး ကို ရွက်ရေ (၇၅၀၀) ဝန်းကျင်၊ ကာလာ (၃)ရောင်ကို (၆၀၀၀) ဝန်းကျင် ထုတ်ယူနိုင်မှာပါ။
📌Epson ရဲ့ Heat-Free Technology ကြောင့် မီးအားစားသက်သာစေတဲ့အပြင် 4.3" Colour LCD Touch Screen ပါတဲ့အတွက် Print, Scan, Copy လုပ်ဆောင်ချက်များကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ..
📌Wifi ပါဝင်တဲ့အတွက်လည်း အချိန်မယူပဲ အလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အာမခံအနေနဲ့ (၂)နှစ် စာရွက်ရေ (၈၀,၀၀၀) ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Epson L15150 A3+ (Print, Scan, Copy, Fax with ADF) ---> 859$
• Print, Scan, Copy, Fax with ADF
• Print speed of up to 25.0 ipm
• Prints up to A3+ (for simplex)
• Ultra-high page yield of 7,500 pages (black) and 6,000 pages (colour)
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
• Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud)
• Maximum Resolution:4800 x 2400 dpi
•Automatic 2-sided Printing:Yes (up to A3)
• Draft, A4 (Black / Colour):Up to 32.0 ppm / 22.0 ppm *2
• Maximum Copy Size:A3
• Resolution:600 x 600 dpi
• Max Copies:999 copies
• Type : Flatbed colour image scanner (CISO)
• Resolution : 1200 x 2400 dpi
• Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex | Duplex)): 200dpi, Black:5sec / Up to 26.0 ipm | 11.5 ipm 200dpi,
• Colour: 10 sec / Up to 9.0 ipm | 6.0 ipm
•ADF Specifications: Support Paper
•Thickness:64-95 g/m2 Paper
• Capacity:50 sheets
🔺Fax Function (Optional)
• Type Of Fax:Walk-up Black-and-white and Colour Fax Capability
• Receive Memory / Page Memory:6MB,
• Page memory : Up to 550 pages
• Resolution:Up to 200 x 200 dpi
🔺Mobile and Cloud Solutions
Features:Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud Other Mobile Solutions:Apple AirPrint, Mopria Print Service
• Number of Paper Trays:3 (Front 2, Rear 1)
🔺Standard Paper Input Capacity:Cassette 1:
• 250 sheets for A4 Plain paper (80g/m2 )
• 50 sheets for Premium Glossy Photo Paper
🔺Standard Paper Input Cassette 2:
• 250 sheets for A4 Plain paper (80 g/m2 )
• 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
🔺Maximum Paper Size:
• A3, Indian Legal, Letter, A4, B4, B5, A5, B6, A6
• 3mm top, left, right, bottom via custom settings in printer driver
🔺Supported OS and Applications
• Windows XP / Vista /7/ 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019, Mac OS X 10.6.8 or later
•Dimensions (W x D x H):515 x 500 x 350mm
• Rated Voltage:AC 220 - 240 V
• Rated Frequency:50 - 60 Hz
• Power Consumption:Operating: 19.0 W Standby: 9.1 W Sleep: 0.8 W Power off: 0.2 W
• Interface: USB:USB 2.0 Network:Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
• LCD Screen:4.3" Colour LCD Touch Screen
☎️ ဖုန်းဆက်ပြီး အိမ်အရောက်မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့..
● 09 45 2244 500 ကို နံနက် (၁၀) နာရီ မှ ည(၆) နာရီအထိ ဆက်သွယ်မှာလို့ရတယ်နော်
ယူနစ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ 👉 www.unique.com.mm မှာ အွန်လိုင်းကနေ စိတ်တိုင်းကျမွှေနှောက် ရှာဖွေဝယ်ယူပြီး ကန့်သတ်ချက်နဲ့အညီ အခမဲ့အိမ်အရောက်ပို့ခံစားခွင့် ရယူနိုင်ပါတယ်..
UNiQUE ၏ ချစ်ရတဲ့ Customer များအားလုံးလည်း ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကြဖို့၊ မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မထွက်ကြဖို့၊ မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်ရပါက အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက် အကာအကွယ်အပြည့်အစုံဖြင့်သာ ထွက်ကြဖို့ ထပ်မံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
မင်္ဂလာရှိပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။
မတ် 21, 2021 at 10:13am
Let me know the brands of Printers with their prices. Pls post them.